Roberto Firmino Iyo Saddex Weeraryahan Oo Kale Oo Liverpool Ka Maqnaan Doona Ciyaarta Caawa Ee PSG | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Roberto Firmino Iyo Saddex Weeraryahan Oo Kale Oo Liverpool Ka Maqnaan Doona Ciyaarta Caawa Ee PSG
(18-9-2018) Kooxda Kubada Cagta Liverpool ayaa caawa garoonkeeda Anfield kusoo dhoweynaysa naadiga reer France ee PSG, kulankooda ugu horreeya ee tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan, kaas oo labada kooxood ugu bilaabmi doona jewi lagu qiimaynayo awooddooda xili ciyaareedkan.
Kulankan ayaa waxa suurtogal ah in Liverpool uu ka maqnaado weeraryahanka reer Brazil ee Roberto Firmino oo Sabtidii uu dhaawac kasoo gaadhay isha bidix, kaddib markii uu difaaca Tottenham ee Vertonghem uu farta ka geliyey, sida ay dhakhaatiirta iyo tababaruhuba sheegeenna, weli lama hubo inuu ciyaari doono iyo in kale, hase yeeshee waxa warkiisa dhabta ah la heli doonaa daqiiqadda ugu dambaysa.
Waxa kale oo ciyaartan ka maqnaan doona labada weeraryahan ee Divock Origi iyo Dominic Solanke oo liiska dhaawacyada Liverpool kula biiri doona Adam Lallana.
Tababare Jurgen Klopp oo wax laga weydiiyey dhaawaca Firmino ayaa mugdi geliyey fursadda uu u haysto inuu kusoo kabato ka hor ciyaartan, hase yeeshee dhinaca kale muu bixinin qiraal buuxa oo ku saabsan inuu maqnaanayo.
Liverpool oo ku duusha weerarkeeda halista badan ee ku dhisan Sadio Mane, Mohamed Salah iyo Firmino ayaa waxay ka hor tegaysaa PSG oo iyaguna ku hubaysan Neymar, Mbappe iyo Cavani.
Rikoodhka Liverpool ee kooxaha Faransiiska
Rikoodhka Liverpool ee kooxaha ka dhisan waddanka Faransiisku waa mid aan lagu tilmaami karin inuu fiican yahay. Kulamada tartanka Champions League, waxay Reds la kulantay naadiyo Faransiis ah 12 ciyaarood, waxaanay guuleysatay 6, shan laga badiyey iyo mid barbar=dhac ah.
Guushii ugu weynayd waxay Liverpool ka gaadhay kooxaha Toulouse iyo Marseille oo xili ciyaareedkii 2007/0 ay kaga adkaatay min 4-0.
Dhinaca kale, shanta kulan ee laga badiyey, lagagama guuleysanin wax ka badan hal gool.